सरसफाइ अभियानको नमुना- विचार - कान्तिपुर समाचार
डा. लक्ष्मी पौड्याल
सरसफाइ अभियानको नमुना
आश्विन १९, २०७४ डा. लक्ष्मी पौड्याल
काठमाडौँ — हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, पहिचानको रूपमा राजधानी काठमाडौंको पशुपतिनाथ जस्तो धार्मिक आस्था र विश्वासको केन्द्र भएर बग्ने वागमती चार वर्ष पहिले मृत थियो । नदीमा पानी थिएन । पानी नभएपछि नदीको रूपमा नभएर ढल र फोहोरले दुर्गन्ध फैलिन्थ्यो ।
मानिसहरू नदीको किनारबाट हिँड्न खोज्दैनथे। हिँडे पनि नाक थुन्नुपथ्र्यो। गाडीमा हिँड्नेहरू वागमती नदी नजिक आइपुग्न थाल्दा हत्तपत्त झ्यालको सिसा लगाउँथे। नदीको किनारमा जग्गा भएका, घर भएका बेचेर अन्तै बसाइँ सर्ने मनस्थितिमा देखिन्थे। नदी किनारका पार्टी प्यालेस चल्न छाडेका थिए। विद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हुन, पढ्न खोज्दैनथे।
तीन–चार तले घर बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई महिनामा २ सय रुपैयाँ दिनका लागि आनाकानी गर्ने हाम्रो समाज छ। अरूका आँखा छलेर मोटरबाइक, गाडी चढेर नदी किनारामा फोहोर फाल्न आउने मानिस अझै पनि भेटिन्छन्। नदी किनारहरूलाई नगरपालिकाले नै फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटका रूपमा विगतमा प्रयोग गरेकै थिए।
यस्तो दुरवस्थामा ‘वागमती हाम्रो पहिचान हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, यसको मृत रूपलाई प्राण दिनुपर्छ’ भन्ने उच्च अठोटका साथ विशुद्ध सामाजिक सेवाको भावनाले २०७० जेठ ५ गतेमा केही सामाजिक अभियन्ता र सामाजिक सेवामा समर्पित संघ–संस्थाको पहलमा तत्कालीन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालज्यूको नेतृत्वमा यो अभियान सुरु भएको हो। आजसम्म आइपुग्दा कुनै चाडपर्व, बन्द, हड्ताल, झरीवर्षा, भूकम्प, नाकाबन्दी आदि नभनी अभियन्ताहरू अविच्छिन्न रूपमा यो महाअभियानमा लागिराख्नुभएको छ। अविच्छिन्न रूपमा यति लामो समयसम्म स्वयंसेवी अभियान अर्को सायदै भएको होला। सफाइ अभियानले सुरुका दिनमा थुप्रै चुनौती भोग्नुपरेको थियो। हाम्रो यो अभियानबाट वागमती नदीको मुहान फेरिन्छभन्ने विश्वास जनमानसमा, कतिपय हाम्रै घर–परिवारका सदस्यहरूमा छँदै थिएन। तर हामी नि:स्वार्थ भावनाले लागिरहयौंंैं, लागिरहेका छौं। यो महाअभियान चारवटा मूल सिद्धान्तबाट निर्देशित छ।
(क) अभियानको कुनै समिति छैन : यो स्वयंसेवी सामाजिक अभियान भएको हैसियतले सबैको अपनत्व हुनेगरी सामुहिक मनोभावनामा अगाडि बढेको छ। सबै अभियन्तालाई यो हाम्रो अभियान हो भनी उत्तिकै सामाजिक सेवाको अनुभूति र जिम्मेवारी दिन सफल भएको छ।
(ख) पैसाको कारोबार हुँदैन : यो विशुद्ध समाज परिवर्तनका लागि सामाजिक सेवामा समर्पित व्यक्तिहरूबाट निर्देशित हुनाले हामी यो अभियानको नाममा पैसा लिँदैनौं, उठाउँदैनौं। सरसफाइसँग सम्बन्धित साधन माक्स, बुट, पञ्जा, डोका, कुटो आदि मनकारी मन र हातबाट दिनका लागि सबैलाई खुल्ला छ।
(ग) अभियानमा कुनै राजनीतिक पार्टीको दलगत गन्ध छैन : यो सबैको अभियान हो। हामी यो अभियानमा दलगत राजनीतिलाई प्रवेश दिँदैनौं। सबै नेपालीलाई नि:स्वार्थ रूपमा यो अभियानमा सामेल हुनका लागि खुला छ।
(घ) परिवर्तनको सुरुवात मबाट हुन्छ : हामीले सधैं आफूले सोचेजस्तो नहँुहुँदा सरकारलाई गालीमात्र गरिरहने प्रवृत्ति छ। ‘एक जिम्मेवार र सभ्य नागरिकको हैसियतले परिवर्तनका लागि म पनि एक हुँ, आफ्नो काम, व्यवहारबाट अरूले सिकुन्’ भन्ने चाहन्छौं भने पक्कै पनि पहिला आफू उदाहरण बन्नुपर्छ। अभियन्ताहरू यही मूल्य–मान्यताबाट प्रेरित छौं। जस्तै– सातामा २ घन्टा राष्ट्रका लागि। हामी हरेक शनिबार ७–९ बजे अभियानमा जुट्छौं। ‘हामी गर्न सक्छौं’, ‘हामीले नगरे कसले गर्ने?’ ‘अहिले नगरे कहिले गर्ने?’ जस्ता मूल्य–मान्यताका आधारमा हामी अभियन्ता सक्रिय छौं।
अभियन्ताहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर लागिपरेका हुनाले यो अभियानले सफलता हासिल गरेको हो। यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, काठमाडौं/ललितपुर महानगरपालिका, अधिकार सम्पन्न वागमती, १७ सयभन्दा बढी संघ–संस्था र लगभग सात लाख स्वयंसेवी वागमती नदीको सफाइमा संलग्न छन्। अहिलेसम्म करिब ११ हजार मेट्रिक टन फोहोर संकलन, जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई नगरपालिकाबाट करिब २९ लाख रुपैयाँ दण्ड जरिवाना भइसकेको छ। वागमतीको किनारमा विभिन्न ठाउँमा वृक्षरोपण, १६ वटा बगैँचा निर्माण भएका छन् र ९ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। वागमती नदीको किनारका सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको चंगुलबाट फुस्काउन सरकारलाई दबाब दिनुका साथै सहयोग पनि अभियन्ताबाटै भइरहेको छ। अभियन्ताबाट सरकारलाई ढल निर्माण तथा अन्य कार्यका लागि नैतिक दबाब भइरहेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको सफाइ पनि जारी छ। यस अभियानबाट प्रेरित भएर देशका विभिन्न २६ ठाउँमा हरेक साता सरसफाइ अभियान चलिरहेको छ।
गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन्। अझै व्यवस्थित तरिकाले स्वयंसेवी कामलाई अगाडि बढाउनुछ। अनि ‘गर्न सकिन्छ’ भन्ने आँट र बल अभियन्तामा छ। अभियन्ताका तर्फबाट स्थानीय समुदायको सहभागितामा अभिवृद्धि, स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाई हस्तान्तरण, निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता अभिवृद्धि गरी जिम्मेवारी दिने कार्यलाई तीव्रता दिन जरुरी छ। अधिकार सम्पन्न वागमती तथा महानगरपालिकाबाट घर–घरमा फोहोर व्यवस्थापन, ठाउँ–ठाउँमा प्रशोधन केन्द्रसहित ढल निर्माण गरी ढलमुक्त नदी र लगभग ५० मिटरको दूरीमा फोहोर फाल्ने भाँडाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। महानगरपालिका र पुलिस प्रशासन मिली व्यवस्थित तरिकाले नदीको किनारमा फोहोर फाल्नेको निगरानी गरी गल्ती गर्नेलाई अधिकतम जरिवाना गर्नु पर्नेछ। नदीको किनारमा घर बनाउन नदिने, हाल रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई राजनीतीकरण नगरिकन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
अधिकार सम्पन्न वागमतीबाट नदीको किनारका सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याई स्थानीयको सहभागितामा बगैंचा तथा पार्क निर्माण गर्नु पर्नेछ। काम गर्नेलाई हौसला बढाउन, जताभावी फोहोर नफाल्नका लागि सर्वसाधारणलाई सन्देश दिलाउन र सरकारलाई जिम्मेवार बन्नका लागि नैतिक दबाब दिन सञ्चार क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
आश्विन १९, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
मोरङ — रंगेली नगरपालिका–२ बबियाबिर्तास्थित कुकुरखोलामा डुबेर बुधबार एक बालकको मृत्यु भएको छ । स्थानीय राम साहका तनि वर्षीय छोरा हेमु साहको मृत्यु भएको हो ।
घर नजिकै रहेको खोलामा खेल्दै जाने क्रममा डुबेर घाइते भएका बालकलाई उपचारका लागि विराटनगर ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको रंगेली प्रहरीले जनायो ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०७:५८